बधाई ! अमेरिकाले दियो सन्दिपलाई भिसा - Articles Nepal
बधाई ! अमेरिकाले दियो सन्दिपलाई भिसा
Articles Nepal August 13, 2019 0
चर्को दबाब पछि नेपाली राष्ट्रिय टिमका चर्चित खेलाडी सन्दिप लामिछानेलेलाई अमेरिकाले भिसा दिने भएको छ। सेप्टेम्बर पहिलो साता आयोजना हुने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जान सन्दिपले अमेरिकी दुतावासमा भिसा आवेदन दिएका थिए। उनि बर्बाडोस ट्रिडेन्टको लागि लिगमा खेल्दैछन्। बर्बाडोस जानको लागि अमेरिका हुँदै जानु पर्ने तथा लिगको खेलहरु पनि अमेरिकामा गर्ने योजना हुँदा सन्दिपले भिसाको माग गरेका थिए।
“अन्ततः समस्या समाधान भएको छ। सहयोगको लागि अमेरिकी दुतावासलाई धन्यवाद। ठुलो धन्यवाद मेरो समर्थक र मेरो लागि चिन्ता व्यक्तगर्नु व्यक्तिहरुको मुल्यवान साथको लागि” सन्दिपले ट्वीट गरेका छन्। सन्दिप अब सेप्टेम्बरको सुरुवातमा अमेरिका हुँदै बार्बाडोस पुग्नेछन्। यसै साता क्यानडामा सम्पन्न ग्लोबल टि-२० मा टोरोन्टो नेसनल्सको लागि खेलेर फर्किएका सन्दिपले क्यारेबियन लिगमा बार्बाडोस ट्रिडेन्टसबाट खेल्दै छन्। सन्दिपको टिममा जेसन होल्डर, वाहब रियाज, शाइ होप, एलेक्स हेल्स जस्ता क्रिकेटरहरु रहेका छन्। बार्बाडोसको पहिलो खेल ८ सेप्टेम्बरमा गुएना एमाजोन वारियर्स बिरुद्ध रहेको छ।
सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपले सेन्ट किट्स एण्ड नेभीस प्याट्रीएट्सको लागि ५ खेलमा कुल ७ विकेट लिएका थिए। सन्दिपको टिम गत सिजन लिग चरण अंकतालिकामा चौथो स्थानमा रहेको थियो भने दोश्रो क्वालीफायरमा पराजित हुँदै समग्रमा तेश्रो भएको थियो। wicketnepal.com बाट
Previous Post: आफ्नै श्रीमानलाई छु’रा हानेर ह*त्या, छिमेकिले खुलाईन रहस्य – भिडियो
Next Post: रवि लामिछाने पक्राउ, अब के हुन्छ?